Galmada Lasameeyo Xiliga Xaaskaagu Uurka Leedahay Iyo qaababka aad ula macaamili lahayd..!! | shumis.net
Home » galmada » Galmada Lasameeyo Xiliga Xaaskaagu Uurka Leedahay Iyo qaababka aad ula macaamili lahayd..!!
Galmada Lasameeyo Xiliga Xaaskaagu Uurka Leedahay Iyo qaababka aad ula macaamili lahayd..!!
Maalmahaan, dadku waxay si ka fudud si kasta oo hore uga hadlaan galmada. Si kasta ha ahaatee, dadku mararka qaarkood way ka weji gabxaan iney ka hadlaan galmada iyo uurka waxaana laga yaabaa iney dhibaato ka qabsato iney su’aalo ku saabsan galmada ula yimaadaan takhtarkooda ama kalkaalisadooda. Sidoo kale, haweenka iyo ragguba inta badan cabsidooda iyo dareemmadooda iyagaa isku qarsada.
Haddii kani uu yahay ilmahaagii ugu horreeyey, waxaa laga yaabaa inaadan ogaannin in uurku uu yahay waqti dareenkaaga badalmo uu adiga iyo aabbaha ilmaha isu kiin beddelo. Waxaa laga yaabaa inaad dareento daal, niyad kacsanaan, farxad, diiqo, rajo, cabsi, hooyonnimo iyo qurux, lur iyo soo jiidasho la’aan. Aabbuhu, dhinaca kale, waxaa laga yaabaa inuu dareemo inuu ku faano inuu ilmo aabbo u noqdo ama uu ka wel welo mas’uuliyado cusub.
Waxaa laga yaabaa inuu dareemo inuu adiga iyo ilmaha kobcaya difaac idiin noqdo ama uu ka masayro culeys saariddaada uurka cusub.
Isbeddelladaan dabiiciga waxaa laga yaabaa iney saameeyaan sida uu midkiinba midka kale ka dareemayo iyo rabitaanka galmada. Shayga ugu muhiimsan ma ahan waxa aad dareemeysiin iyo sida aad ugu maleyneysaan inuu xun yahay, ee waa isla wadaagidda dareemmadaas. Sidaan, ayaad ku sameyn kartaan isbeddello si aad xiriirkiinna galmo uga yeeshaan mid labadiinnaba idiin wanaagsan.
Waxaa soo socda qaar ka mid ah jawaabaha su’aalaha ku saabsan galmada ee inta badan dhiba lammaaneyaasha ilmaha filanaya. Haddii aad su’aalo dheeraad ah qabtid, ama haddii aad dhibaato galmo aad qabtid waqtiga uurkaaga oo aadan adinku xallin karin, talo weydiiso takhaatiirteenna adigoo kala soo xiriira emailkaan Galmo@shumis.net. Inkastoo, laga yaabo inaad u maleyso in su’aashaadu ay tahay mid nooc ah, dadka kale waxay dhab ahaantii qabaan walaac kaas la mid ah.
Title: Galmada Lasameeyo Xiliga Xaaskaagu Uurka Leedahay Iyo qaababka aad ula macaamili lahayd..!!
Posted by galmada Net, Published at March 03, 2016 and have 0 comments